Ulwakhiwo kunye nolwakhiwo lweMerail abavelisi kunye nabaXhasi - Kwlwakhiwo nakwizakhiwo zeMerail Factory
Bar Grate, mqengqeleki & Ukunikela, umlomo, leposi izixhobo ukutshisa inkunkuma.
Roller & Ukunikela
Impompo & AMACANDELO ivelufa
Intsimbi eNsundu + ngeentsimbi
Ukufakwa kwesinyithi okungagungqiyo
Ubhedu, uBrass kunye neNickel Bronze castings
uphose izibiyeli ezixhonyiweyo
phosa ngaphambili uloliwe wesilayidi
Iinqwelo ezithwele isali
isiseko se-latch cast
Trailer & Truck kumiswa iindawo
Trailer & iinkuphelostencils Brake truck
Itreyila kunye neTruck bracket outrigger ulwandiso
Injini yokukhwela iVolvo Penta
Ukutya / Ukukhupha ngokuphindaphindiweyo
Ifolokhwe yokutshintsha kweebhokisi
Ulwakhiwo kunye neMatriki yokwakha
Imibhobho kunye nemveliso yokuhambisa amanzi
Umbhobho No-hub, izixhobo, yemiqadi yokuhlanganisa
Isilayidi, isiphelo sencwadi, i-nut, i-wedge, i-rossette
Amacandelo okuhombisa, intsimbi ebunjiweyo + iinxalenye zentsimbi
Izixhobo zokulwa uMlilo kunye nezixhobo ezingasebenziyo
Amacandelo okufikelela kumbane wombane
Al, Insimbi engenasici, i-Cast iron, iivili zesandla seBakelite
Ukufakwa kwentsimbi engenasici
Ubhedu, Brass & Nickel I-castings yebronze
Brass intloko zokuchela umlilo kwinkqubo zokuchela amanzi
Akukho Pipe Hub, Lokulinganisa, Coupling
Izixhobo zombane zombane
Ukugxilwa kwabasebenzi, Ukuqinisa, Ukunyathela iiNxalenye
Singumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi weenxalenye ze-scaffolding kunye nenkampani yokuthumela ngaphandle kunye nokwenza, ukubetha, ukubetha, ukubanda nokubanda kwonyango lwangaphandle-njengokutshisa i-galvanization eshushu, i-zinc plating kunye ne-powder coating njl. Baza, ekubumbeni nasekuqiniseni iimveliso zezincedisi kwimarike yaseYurophu naseMntla Melika ngaphezulu kweminyaka engama-20. Sinobunjineli abanamava nabanokunikezela ngokwezifiso iimveliso njengemizobo nganye ...
Ubungakanani obukhulu beCastings
Ubungakanani be-castings yesayizi enkulu: Isiseko sethu sokulahla isayizi enkulu sigubungela indawo ye-60,000 yeemitha zesikwere kunye nendawo yokwakha ye-23,000 yeemitha zesikwere. Kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-660, kubandakanya nabasebenzi abaphezulu abali-180 bezobugcisa kunye nabasebenzi abangama-480 abakumgangatho ophezulu. Le nkampani yinkampani ngokukodwa kuphuhliso kunye nokuveliswa kwezinto ezahlukeneyo yesinyithi banxibe-enganyangekiyo izinto ezifunekayo mveliso ezifana nokulungiswa kwezimbiwa, yokunyibilikisa isinyithi, amandla, izinto zokwakha, njl Izinto eziphambili banxibe-enganyangekiyo ...
Izahlulo zokuhombisa Thina (M & E) singumvelisi olichule wentsimbi kunye neentsimbi ezihombisayo. Ulawulo lwangaphambili kunye nefilosofi ejolise kwimarike ifumana uphuhliso oluzinzileyo ngokweemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nedumela elihle. I-M & E yokuhombisa intsimbi kunye nentsimbi yokuphosa okanye iimveliso zenziwe zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ziveliswa zombini ziinkqubo zomsebenzi wesintu kunye nendlela elahlekileyo ye-wax enokuthi isiqinisekise ukuba senze uluhlu olukhulu ...
Imibhobho yamanzi kunye neMveliso yokuhambisa amanzi
Intshayelelo yeMveliso Imibhobho ye-M & E yokuthumela ngaphandle kunye nokufakwa, ukudibanisa, imibhobho kunye neemveliso zokuhambisa amanzi ngaphezulu kweminyaka engama-30. Akukho mibhobho yeHub kunye nokufakwa okwenziweyo ngokomgangatho we-ASTM A888 waseMelika, umgangatho weCSAB70 waseCanada kunye nomgangatho waseYurophu we-EN877. asibhalisanga mibhobho yehabhu kunye nokufakwa kwi-IAMPO (enophawu lwe-UPC) lokumakisha "MMCST" nakwiCSA yokumakisha "HB". IMVELISO YETHU Ngemibhobho kunye nokufakwa, sikwanikezela ngemiqadi yokuhlanganisa intsimbi engalinganiyo ngobukhulu obahlukileyo ukusuka ku-1-1 / 2 ”ukuya ku-10”. stee ...
Uqinisa umbhobho kunye nokuhlangana steel Stainless
Uqinisa lombhobho kunye nokuhlangana kwentsimbi engenasici: Ukuqiniswa kwethumbu, iintsimbi ezingenanto ezingenanto kunye neefakethi ezisetyenziswa kakhulu kumzi mveliso wombhobho weoyile, umbhobho wemoto, inkqubo yokuhambisa amanzi. Amandla emveliso sisigidi esinye ngosuku. Sinento umgca wemveliso epheleleyo: imveliso ngumngundo, imveliso imveliso, unyango umphezulu, irabha vulcanizing, kunye nemveliso Screw. Oko Sikwenzayo Singumthengisi we-OEM oqinisekisiweyo weenkampani ezinkulu zeemoto ezisebenza kakhulu ...
Imibhobho ye-M & E yokuthumela ngaphandle kunye nokufakwa, ukudibanisa, imibhobho kunye neemveliso zokuhambisa amanzi ngaphezulu kweminyaka engama-30. Akukho mibhobho yeHub kunye nokufakwa okwenziweyo ngokomgangatho we-ASTM A888 waseMelika, umgangatho weCSAB70 waseCanada kunye nomgangatho waseYurophu we-EN877. asibhalisanga mibhobho yehabhu kunye nokufakwa kwi-IAMPO (enophawu lwe-UPC) lokumakisha "MMCST" nakwiCSA yokumakisha "HB". Ngemibhobho kunye nokufakwa, sikwabonelela ngezixhobo zentsimbi engenasici ngobukhulu obahlukeneyo ukusuka ku-1-1 / 2 "ukuya ku-10". isinyithi (okanye intsimbi engenakulinganiswa) ipayipi / i-clamp ...
Qala iJurney yakho
Umgangatho we-4 wesakhiwo solawulo lweofisi, # 355 Xinhua indlela, eShijiazhuang, China. 050051